बहुप्रतिक्षित कास्कि-२ मा कस्ले मार्ला बाजी, नेकपा कि साझा बिबेकशिल ! - नुवाकोट एक्स्प्रेस : मोफसलकै लोकप्रीय डिजिटल एक्स्प्रेस
बहुप्रतिक्षित कास्कि-२ मा कस्ले मार्ला बाजी, नेकपा कि साझा बिबेकशिल !
काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर १४ गतेका लागि उपनिर्वाचनको घोषणा गरेसँगै तत्कालीन संस्कृति तथा पयर्टनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त कास्की–२ को उम्मेदवारीबारे चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान गरेसँगै चुनावी जोड घटाउ र निर्वाचन परिणामको विभिन्न आँकलनसहित काउन्ट डाउन सुरु भएको छ ।
यससँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पनि चर्चा सुरु भएको छ । तर, चुनावी नतिजा सकारात्मक हुने/नहुने ढुक्कको स्थिति नरहेकाले गौतमले अझै त्यसबारे कतै पनि औपचारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् ।
बरु, उनले नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा रवीन्द्र अधिकारी पत्नी विद्या भट्टराईलाई नै उम्मेदवार बनाउन प्रस्ताव गरेको समाचार यसअघि बाहिर आएको थियो ।
तर, यसबारे कसैले जिज्ञासा राखिहाले पनि उनि तर्किंदै आएका छन् । गौतम सकभर अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमदल दाहालको प्रस्तावमा पार्टीले केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय गरिदेओस् भन्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।
गौतम गत निर्वाचनमा बर्दियाबाट ७ सय ५३ मत अन्तरमा कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए । पराजित भएलगत्तै गौतमले आफूमाथि पार्टीभित्रैबाट अन्तरघात भएको आरोप लगाउँदै छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।
साबिक एमालेको प्रदेश कमिटीले बैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै बनाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको पनि थियो ।
उक्त समितिले आरोपित श्याम ढकालसहितलाई वयान पनि लियो तर कसको अन्तरघातका कारण पराजित हुनुपरेको समितिले स्पष्ट पार्न सकेन । बरु, ढकाललाई नै नेकपाको प्रदेश कमिटी सदस्य बनाइएपछि गौतम आक्रोशित हुँदै आएका थिए ।
तर, अध्यक्ष ओलीले चिढिएका गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएर र कास्कीबाट निर्वाचित गराउने वचन दिएपछि उनको दोस्ती फेरि जोडिएको छ । गत निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट अधिकारी साढे ७ हजार मतान्तरमा विजयी भएका थिए ।
नेकपाबाट गौतम उमेदवार बने बैकल्पिक शक्ती साझा पार्टीले संयोजक रवीन्द्र मिश्रलाई मैदानमा उतार्ने तयारी गरेको छ। साझाले सके जित्नेगरी नसके सम्मानजनक मत ल्याएर बलियो दलको छप छोड्ने गरी पार्टी संयोजक मिश्रलाई उमेदवार बनाउन लागेको हो ।
काठमाण्डौ १ मा कडा प्रतिस्पर्धाका साथ झिनो मतले हारेका मिश्रले पोखराका मतदाताबाट राम्रो प्रतिकृया पाउने बिश्वास राखेका छन ।
नेपालमा असारभित्रै रेल सञ्चालनमा ल्याइदै
त्रिभुवन त्रिशुली माध्यामीक विधालयको ६९औ वार्षिकोत्सव सम्पन्न (भिडियो)